ပြော.. မပြောချင်တော့ဘူးကွယ်ရို့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ပြော.. မပြောချင်တော့ဘူးကွယ်ရို့
Posted by စဆရ ႀကီး on May 11, 2011 in News, Opinions & Discussion | 15 comments
ခုတစ်လော မျက်စိထဲမှာ အတော်လေး ကိုးလိုးကန့်လန့် ဖြစ်နေတဲ့ Post တွေ မကြာခဏ တက်တက်လာတာတွေ့နေရတယ်.. ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတာကို လွတ်လပ်စွာ ဖော်ထုတ်တာတော့ ကြိုက်ပါရဲ့.. ခုတော့ အဲလိုမဟုတ်ပါဘဲ ဒီဆိုက်လေးက လူဖတ်များတယ်ဟ၊ ဖွလိုက်ဦးမဟလို့ ရေးသားနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကို By name မပြောလိုဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အကြောင်းအရာတူ၊ အမျိုးအစားတူနေတာကို သတင်းဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ တင်နေတာ သတင်းမဟုတ်ဘဲ အတင်းဖြစ်ဖြစ်လာတယ်။
ဒီဆိုက်ထဲမှာ ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက်ဆို အလွှာပေါင်းစုံက လူတွေရှိတယ်၊ မျိုးချစ်မြန်မာတွေလဲရှိတယ်၊ ဆရာဝန်တွေလဲရှိတယ်၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ ဒီဇိုင်နာတွေ၊ ဘုန်းကြီးတွေ၊ အလုပ်သမားတွေ.. အို တော်တော်လေးကို စုံလင်ပါပေတယ်။ ဒါပေမယ့် မှန်တာကိုပြောဖို့၊ ပြောသင့်ပြောထိုက်တာတွေကို ပြောဖို့ လူတွေက တွန့်ဆုတ်နေသလိုလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာက မြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်တွေကိုသာ ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်၊ ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေ၊ ဘာတွေကိုပဲလုပ်လုပ်၊ မြန်မာမိဘနှစ်ပါးက ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ဘယ်သူမဆို မြန်မာပါပဲ။
သတိထားမိကြမလား၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာပဲလားတော့ မသိဘူး၊ အစိုးရ မကောင်းကြောင်းရေးချင်သလိုလိုနဲ့ ဘာသာရေးအကြောင်း ဝင်ရောက်ရေးသားနေတာ၊ သူတို့လူမျိုးတွေ လုပ်ချင်ရာ လုပ်ခွင့်မရတော့လို့ အသံကျယ်လောင် ကျယ်လောင်နဲ့ အုပ်စုဖွဲ့ ဝိုင်းဝန်းရေးသားနေကြတာ ကျုပ်အမြင်မှာတော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဘူးဗျာ.. ဒါကြောင့် ဟောဒီလိုလေးတောင် ဝင်မန့်လိုက်သေးတယ်
“ဒီအမိန့်စာကတော့ ဖြစ်သင့်တယ်ထင်တယ်.. လူမျိုရင် လူမျိုးပါပြုတ်မယ်၊ လူမျိုးမပြုတ်ခင် ယဉ်ကျေးမှုအရင် ပြုတ်မယ်၊ ပြီးရင်တော့ ဘာသာရေးအရ ဝါးမျိုခြင်းပါ အရှင်လတ်လတ်ခံရပါမယ်။ စစ်တိုက်ပြီး နိုင်ငံကိုသိမ်းလိုက်တာ လူမျိုးမပြုတ်နိုင်ပါဘူး၊ လူအချင်းချင်း သွေးရောနှောစေပြီး မျိုးနွယ်ပါ အစဖျောက်ပြစ်လိုက်ကြတာ ဘာတွေလဲဆိုတာ ကိုယ့်နိုင်ငံသမိုင်းကို ပြန်လေ့လာကြည့်ကြစေလိုပါတယ်..
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ တစ်ချိန်တစ်ခါက မြို့အသီးသီးက အစည်ကားဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့နေရာတွေမှာ နေထိုင်၊ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြဖူးပါတယ်။ ခုချိန်မှာ အဲဒီနေရာတွေမှာ ဘယ်သူတွေရောက်နေလဲ? ဝံသာနုစိတ်ဓါတ်လေး မွေးကြပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေက အားနာတတ်တော့ အဲဒါကကိုပဲ သူများနောက် ကျန်နေခဲ့ကြတယ်လို့မြင်ပါတယ်။
ဒီမှာ လူနဲ့ လူချင်း တူတူပဲလို့ အော်နေတဲ့သူတွေကို သူများနိုင်ငံ၊ သူများအရပ်မှာ သွားရောက်နေထိုင်ကြည့်စေလိုတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးတွေကို ဘယ်လောက်တောင် နှိမ့်ချဆက်ဆံနေကြတယ်ဆိုတာ သိစေလိုတယ်။ ဒါတွေကို ကိုယ်တိုင်သိရှိ၊ နားလည်မှ ဒီအကြောင်းကို ဝေဖန်စေလိုတယ်။ မြန်မာစာရေးတတ်တာနဲ့၊ မြန်မာလို ပြောတတ်တာနဲ့ မြန်မာပြည်မှာနေမယ်၊ မြန်မာလူမျိုးပါလို့ ဝင်ပြီးတော့ နာပြနေတဲ့သူတွေ၊ ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှ ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာလို့ မသတ်မှတ်ဘူးဗျာ။
အားအားရှိ ဒီအကြောင်းကိုပဲ မပြီးနိုင်၊ မစီးနိုင်ရေးတင်၊ နောက်လိုက် နောက်ပါအပေါင်းအသင်းတွေ စုံညီစွာနဲ့ လိုက်ဖွနေကြတာ။ ဘာသာရေးအကြောင်းကို ရှေ့တန်းတင်ချင်နေတာကို အစိုးရအကြောင်း မကောင်းရေးသလိုလိုနဲ့။
ကျုပ်မန့်တာကို မဖျက်ခင်မှာ ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ်ရေးလိုက်တယ်။
ကျုပ်ကတော့ ရှင်းရှင်းနဲ့ ဘွင်းဘွင်းပဲ၊ အမြင်မတော်တာတွေ့ဝင် ဝင်ပြီးပွကြီးလုပ်မှာပဲဗျို့
Dear ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ,
Some religion said that their religion is peaceful & good.
Then, I don’t know, why those religious people
want to flee from their own religious country &
want to stay in other religious country.
Until this stage, it is quite OK for me,
but, after arriving to other country,
then, they said they cannot follow your tradition, culture & rules &
we have to make new rules for them & their religion.
(some of their values are against human right & look alike barbarism)
Moreover, they even threaten to change our religion.
I really believe in democracy & human right,
But, it is really annoying for other person or country &
threatening our stability & security.
အကို ရှုံးလူ ခင်ဗျား…..posts တင်တဲ့သူတွေ ထဲမှာလဲ အကိုပြောတဲ့လူမျိုးတွေ ပါ ပါတယ်ခင်ဗျ….
ကျွန်တော် အားလုံးကိုတော့မသိပါဘူး …၂ ယောက်လောက်တော့သိပါတယ်ဗျ…
ဘာသာရေးဘက်ကို ကူးပြောင်းအောင်ပြောလာသူက လူကလေး ငကောင်းမြတ်ပါခင်ဗျား…
မန်ဘာ အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
ဒါတွေအားလုံးဟာလဲ…ငကပ်ဖားက ပေးလာတဲ့ဒုက္ခ လို့ပဲပြောပါရစေဗျာ…၊။
ယုန်ကလေး နှာစေးသလို နေလိုက်ပါ … ။
နှာစေးသလို နေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲ။။ ဒါက လူမျိုးရေး ဘာသာရေး ကိစ္စ ။ လူမျိုးတစ်မျိုးဟာ ကိုယ့်အမျိုးအနွယ်ကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သားသမီးဝတ္တရား ငါးပါးမှာ စောင့်လေမျိုးနွယ်ဆိုတဲ့ အချက် ဆိုတာပါတယ်လေ။။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်နဲ့မဆိုင်သလို ဖာသိဖာသာ နေမယ်။ ကိုယ့်ကိုမှဘာမှမထိခိုက်တာလို့ ယူဆရင်တော့ ဒါ ဓမ္မဒရယ် ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုရမလားပဲ။။ မမ etone တို့လို ဗဟုသုတ ပညာညာဏ်ရှိတဲ့ လူတွေက ဦးဆောင်တိုက်တွန်း ပေးပါ မမ ရေ—– ဒါအရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စပါ။ တော်ကြာ မလေးရှား တို့ အာဖဂန်တို့လို သမိုင်းပျောက်သွားမှဖြင့် ။။။။ မြန်မာပြည်မှာ လူဖြစ်ရတဲ့ တစ်ခုတည်းသော ဘဝအဓိပါယ်က ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုး ဖြစ်ရခြင်းပါပဲ— နောက်လာမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မျိုးဆက်တွေ အတွက်ထည့် စဉ်းစား မှ စောင့်လေမျိုးနွယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်ကို ကျေပွန်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။။။
ဟုတ်ကဲ့ဗျ……. သူကြီးကလဲ ထိုင်ကြည့်နေတယ်လေဗျာ….
အားလုံးကို ဖျက်ပေးပါပြောတာလဲ ၅ ကြိမ်ခန့် ရှိပါပီ… သူကြီးက နောက်နေတယ်…ခစ်ခစ်..
ကပ်ဖားက မမှန်တဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ မိုးကြီးပစ်တာကိုထန်းလက်လေးနဲ့ကာလို့ အပစ်လွတ်သွားမှာစိုး.၊
မမ etone ရေ သူကြီးကိုကူပြောပေးပါခင်ဗျ…..အရင်ကဟာတွေရော ခုဟာတွေရော နောက်ထပ်တက်လာမဲ့
ကိ်ုရှုံးကိုထောက်ခံပါတယ်။ မေလည်း ဖတ်ပြီးစိတ်ထဲ ကိုးလို့ကန့်လန့်နဲ့ ကိုယ့်ရှေ့ကအကိုအမတွေက ဘာမှ ဝင်ပေးကြတော့ မဝင်ရေးတာ။ သူ့တင်ထားတဲ့ စာ နဲ့ ခေါင်းစဉ်ကဘာမှမဆိုင်ဘူး။ အားလုံးကို စိတ်ဝင်စားလို့ အစကအဆုံး သူတို့တင်ထားတာတွေကို လိုက်ဖတ်ကြည့်ပြီးပြီ။ ဗဟုသုတရစရာ ဘာမှမရှိသလို တယောက်တည်းကို အုပ်စုဖွဲ့ပြီး ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဝိုင်းအတင်းပြောနေကြတဲ့ ပုံစံနဲ့တူနေတယ်။တကယ်အမြင် မတော်ပါဘူး။ သူပြထားတဲ့ စာမှာတစ်ဝက်တစ်ပျက်ကြီးနဲ့။ စာနေ့စွဲ ကလည်း ကြာနေပြီ။ ပြောချင်တာကတော့ ဗဟုသုတရှိတဲ့စာလေးတွေပဲဖတ်ချင်တယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ အတင်းစာတွေကို မဖတ်ချင်ဘူးဆိုတာပါဘဲ။
အကိုတို့အမတို့ရေ မဖတ်ချင်ရင်ကျော်ဖတ်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ပါရဲ့ရှင်၊
ကျွန်မတို့ တင်နေတာတွေ ဖတ်ရသူတွေအတွက် ကသိကအောက်နိုင်မယ်ဆိုတာ သိပါတယ်၊
သူကြီးကို မေးလ် ပို့ထားပါတယ် ၊ သူက ဖျက်တော်မမူသေးလို့ပါရှင့်၊
ဒီ MG မှာ ဗဟုသုတ ရမဲ့ posts တွေများပါတယ်ရှင်၊
ချန်ခဲ့ ပီးကျန်တဲ့ သတင်းလေးတွေကို ဖတ်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်၊
ဒီဆိုဒ်ကို မန်ဘာဝင်ထားတာ ဗဟုသုတ ရှိတဲ.စာတွေပဲ ဖတ်ချင်လို.ပါ..။
သတင်းမဟုတ်တဲ. အတင်းစာတွေကို မဖတ်ချင်ပါ..။
ဟင်…။ ရှုံး ….. ငါလည်း ဘာမှ မပြောရ မရေးရသေးပါဘူး အဒူကိုပြောနေတာလဲ?
လက်တွေ့ သတင်းသမားက မဆင်းနိုင်..အမှန်မရှာနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာ.. တိုင်စာ..ပစ်စာတက်လာတာကို.. အာဏာပိုင်တွေဘယ်လိုရှင်းသလဲ..ထင်သာမြင်သာဖြစ်တာပေါ့…။
ဘယ်သူကမှန်တယ်..မှားတယ်.. သူကြီးက ဘယ်လိုသိနိုင်မှာလည်း..။
တင်ထားတာတွေတော့ မဖျက်ဘူး..။ ထပ်တင်တာတော့.. ခွင့်မပြုတေ့ာဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်..။
အဲဒါနဲ့ဆိုင်တာတွေမှာ.. မန်းနိုင်တာတွေလည်း မနက်ဖြန်ဆို ..အကုန်ရပ်ပါမယ်..။
အကိုတွေ အမတွေနော် သူကြီးတောင်ပြောနေပီ ၊အတင်းတော့အတင်းပါ ၊ ဒါပေမဲ့ အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမို့ပါ ၊
သတင်းတော့ကြားနေပါပီ၊ အဲ့ဒီ ကပ်ဖားကြီး အလှည့်ရောက်နေပါပီ ခစ်ခစ်၊
အရူးမီးဝိုင်းဖြစ်နေပါပီ၊ ကံ ကံ၏အကျိုးပေါ့ရှင်၊ မကောင်းသူတို့သွားရာလမ်း ဆိုတာဘယ်လိုလဲ သူသိရ
တော့မှာပါ၊ အားလုံး ကိုတောင်းပန်ပါတယ် ၊
ငါကတော့ ကိုယ်စာ့ကိုယ်ချစ်လို့ ဒီပြင်စာသိပ်မဖတ်တတ်ဘူး (အမှန်မှာ စာညံ့သောကြောင့်)
ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်သောကြောင့် ကိုယ့်ပြည်တွင်းဖြစ် အမျိုးကောင်းသမီးတွေကိုသာ ချစ်ခွန်းခြွေခဲ့ပါသည် (အမှန်မှာ သူတစ်ပါးဘာသာစကားနှင့် အဆင့်အတန်းကို လိုက်မမှီသောကြောင့်)
ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းသိမ်းသောအားဖြင့် သရုပ်ပျက်ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ရှောင်ကျဉ်ခဲ့ပါသည် (အမှန်မှာ ဝယ်ယူမဝတ်နိုင်သောကြောင့်)
ငါးပါးသီလကို ခါးဝတ်ပုဆိုးကဲ့သို့ မြဲအောင်ကျင့်ခဲ့သည် (အမှန်မှာ ရွာဦးကျောင်းမှ ဆရာတော်နှင့် ငယ်ဆရာများ၊ မိဘများ၊ ဘိုဘွားများနှင့် အမျိုုးအဆွေများကို ကြောက်သောကြောင့်)
သူများလို နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းများလည်း အာမရိုက်ပါ (အမှန်မှာ ဗဟုသုတ နည်းသောကြောင့်)
ဘာသာတရားကိစ္စတွေမှာလည်း ဝင်ဖွမကြည့်ပါ (အမှန်မှာ ပါဠိစာလုံးတောင် ဖြောင့်အောင် မရေးတက်သောကြောင့်)
သို့သော် ….. ပေါက်ကရမှန်သမျှကို အတည်ပေါက်နှင့် ရောချတက်သည်
င်တို့ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပေါက်ကရတွေလုပ်တတ်သော
ဒီနေ့နောက်ဆုံးဆိုလို့ ပြောခဲ့ဦးမယ်….။ ဆိုဒ်လေးတယ်…။